Qiimayn farsamo oo dhakhso leh iyo oraah dhakhso leh. Ku soo dhawow si aad wax uga weydiiso ugana hadasho nidaamka.
Tareenka aluminium Rail
Kuleylka kuleylka kuleylka ee aluminium
Nalalka aluminium ee LED
Qalabka aluminiumka qaabeynta qalabka
Qalabka aluminium ee loo yaqaan 'Chassis aluminium' iyo sanduuqa sanduuqa aluminium
Darbiga daahyada Aluminium
Daawaha aluminium ee tubbada wareega ah & tubbada laba jibbaaran
Qaybaha birta ee ka shaqeynaya CNC
Qalabka maaddooyinka aan caadiga ahayn
Qalabka birta ee aan caadiga ahayn
Qalabka birta ahama ee aan caadiga ahayn
Noocyada kale ee qaybaha aluminium aluminium
Alaabta guryaha ee Aluminium
Sariirta ubaxa Aluminium
Maxaad u dooranaysaa astaamaha aluminium ee warshadaha dayrarka caadiga ah?
Iyadoo la horumarinayo The Times, shirkado badan oo soo saarayaasha qalabka warshadaha ah ayaa jecel inay qalabkooda iyo aaladohooda ku hubeeyaan xayndaabka, iyagoo ciyaaraya go'doomin nabadgelyo si loo ilaaliyo howlaha caadiga ah ee mashiinnada iyo amniga shaqaalaha. Sidee ku saabsan aluminium warshadaha loogu talagalay xayndaabka gaarka ah? Waa inuu fiicnaadaa! Iyo ...
Maxay tahay sababta aluminiumku u dhinto - furitaanka caado iyo aad u badan?
Macluumaadka aluminium ee warshadaha waa nooc ka mid ah aluminium-ka aluminium aluminium oo ay soo saartay aagga warshadaha ee loo isticmaalo alaabada astaanta. Qalabka Aluminiumku wuxuu u dhintaa macnaheedu waa marka lagu daro kuwa 20,30,40,50,60,80,90,100,120 iyo taxanaha kale ee caadiga ah ee aluminium, aaladda aluminium ee aluminium sidoo kale way yeelan kartaa ...
Noocyada aluminium ee loo yaqaan 'Custom-made aluminium' waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo khatar badan
1. Dhab ahaan miyay tahay in la habeeyo? Haddii aad rabto inaad u habeysid astaanta aluminium ee qaabka dibedda ee qalabka, waxaa lagugula talinayaa inaadan habeynin, sababtoo ah astaanta aluminium ee caadiga ah waa muuqaal tayo sare leh oo aluminium ah, waxaana jira qeexitaanno badan, ca ...